I-China Fine Factory ixabiso lesamente lokugaya uncedo lwe-Cement Additive Manufacture kunye neFactory | Fluffier
I-Agent eNcedisayo yeMichiza, i-Agent eNcedisayo yeMichiza
Umxube wokugaya isamente, ukudibanisa kwesamente
Ii-Agents eziNcedisayo zokugquma, ii-Electronics Chemicals, ii-Agents eziNcedisayo zesikhumba, iiChemicals zePhepha, izongezo zePetroleum, ii-Agents eziNcedisayo zePlastiki, ii-Agents eziNcedisayo zeRubber, ii-Surfactants, ii-Agents eziNcedisayo zoMlaphu, iiKhemikhali zoNyango lwaManzi kuphela.
I-0.1% yobunzima besamente
Uncedo lokusila isamente 0.1%
Le mveliso isekelwe kwiimolekyuli ze-polyol, ukuguqulwa kweemolekyuli ngexesha elifanayo lidityaniswe namanye amacandelo okugaya. Le mveliso ingasetyenziswa ngokuthe ngqo njengoluhlobo lolwelo oluncedisayo lokugaya. Inokuphinda ixutywe kunye nezinye izinto zokuqinisekisa amandla e-cement.Le mveliso isetyenziselwa ukuveliswa kwezixhobo zokugaya, inokunciphisa ixabiso eliphezulu lezinto eziluhlaza (ezifana ne: triethanolamine)
ukuxhomekeka, ngexesha elifanayo, amandla okugqibela e-samente akanalo imiphumo emibi.
Intshayelelo: I-MJ-3B yinto yokuncedisa i-compound grinding, i-brown liquid engenabutyhefu kwaye ayinayo i-corrosion. Kananjalo ayinakutsha, ayiqhumi kwaye ayinabungozi kumzimba womntu. Umxholo wayo we-alkali ungaphantsi kwe-2 ‰ kwaye inani lomxube li-0.03% yobunzima bekhonkrithi. Inokukhuthaza uchulumanco lweclinker kunye namandla aphakathi okanye asemva kwexesha. Isebenza kwi-p.o42.5 kunye ne-p.o52.5 yesamente. Imveliso yemayile ngeyure ingaphucuka nge-10% -30% kwaye uxinano lunokufikelela kwi-1.08t/m³-1.15t/m³.
I-1, isixa esilinganiselweyo sale mveliso sinokunciphisa ngokufanelekileyo ukungqubana koomatshini kunye nokwandisa i-10% -20% yemveliso yomatshini wokugaya i-slag ngeyure.
2, inokuphucula ngokufanelekileyo umsebenzi we-slag.
3, ilungele inkqubo yokusila yesekethe evaliweyo kunye nenkqubo yokugaya yesekethe evulekileyo.
I-4, inokunceda ukugaya i-slag, ukuphelisa i-adsorption ye-electrostatic kunye nokwandisa indawo ethile yezohlwayo zezimbiwa, ngaloo ndlela imveliso kunye nokusebenza kunokongezwa.
Umxholo oZiqilima %:80%±1.5
I-1, umda wesicelo: kuphela i-slag yokugaya
2, isixa sokuxuba:0.03% yobunzima besamente
1, zigcinwe kwisikhongozeli esivaliweyo, ukunqanda ukukhanya kwelanga kunye nobushushu obuqhaqhazelisa amazinyo.
2, lungisa iiparamitha ezifanelekileyo zenkqubo yokugaya ngexesha lokusetyenziswa
I-3, i-TGA-5 idinga umxholo wokufuma opheleleyo wezinto eziphathekayo awunakudlula i-3% kunye nobushushu bezinto zokugaya azikwazi ngaphezu kwe-140 ℃
4, ixesha lewaranti ziintsuku ezingama-90;
5, igcinwe kwiqondo lobushushu -5 ° C ~ 45 ° C
Le mveliso yi-200kg igubu leplastiki okanye iitoni ze-1000kg zemiphanda okanye ukupakishwa kwengxowa engamanzi, ukuphepha ukukhenkceza, kusebenza unyaka omnye. Ngaphezulu kobomi beshelufu ekufuneka buqinisekiswe ngovavanyo ukuba ingaphinda isetyenziswe.
1. Kwiintsuku ezi-7-10 ukususela kumhla wokuhlawula
2. Umyalelo wesampula (ubandakanya i-10KG) iya kuhanjiswa kwiiyure ezingama-24
Fedex, DHL, TNT, EMS, OCS, Aramex njl.
1. Q: Ngaba uyifektri okanye inkampani yokurhweba?
A: Singumzi-mveliso ocacisa kwintsimi ye-concrete admixture iminyaka engaphezu kwe-10.
2. Q: Ngaba uyakwamkela ukwenza ngokwezifiso?
A: Ewe, sinako ukuvelisa i-admixture ngokuhambelana neresiphi yakho.
3. Q: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: Intlawulo ≤1000USD, 100% kwangaphambili.
Imiqathango yokuhlawula:> 1000USD, T / T (30% kwangaphambili, ibhalansi ye-bill of lading) okanye i-L / C ekuboneni.
Okanye njengesicelo sakho.
4. Umbuzo: Ngaba iisampulu zisimahla?
A: Yamkela uvavanyo lwesampulu yasimahla, umthengi uthwala imithwalo.
5. Q: Kude kangakanani ixesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokuqhelekileyo i-1 ukuya kwiiveki ezi-2, kuxhomekeke kubuninzi bomyalelo.
2.Umvelisi wokuqala owaphanda ngokuzimeleyo, waphuhlisa kwaye wavelisa iimveliso ezongezelelweyo zemichiza yokwakha, kubandakanywa iRedispersible Polymer Podwer, iHydroxypropyl Methyl Cellulose, iPolyvinyl Alcohol kunye neSuperplasticizer eJinan, isixeko esilikomkhulu lePhondo laseShandong.
Ngaphambili: Izongezo zesanti yesamente yodaka olomileyo
Okulandelayo: Factory ixabiso admixture Cement izongezo zesamente aid yokusila
Isongezo sokuSila isamente
Izongezo zokuSila isamente
Calcium Chloride Cement Additive
Isamente Abrasive Additive
Izongezo zesamente zokomelela
Izongezo zesamente zeConcrete
I-Cement Fast Setting Additive
Isamente yokuSila Ukongeza
I-Cement Hardener Additive
Factory Price Cement Ukugaya Additive
Factory Price Cement Ukugaya izongezo
Factory Sale Cement Ukugaya izongezo
Ukuseta ngokukhawuleza iSement Additive
ILatex Cement Additive
IBanga eliPhezulu leBanga lokuSila iSement Additive
Umgangatho ophezulu weCement wokugaya izongezo
Ixabiso lomzi-mveliso we-admixture Cement izongezo zesamente...